၁၁နှစ်သမီးငယ်လေးကို သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးရင်းလျှော့ခ်ဖြစ်ကာနေရာမှာပင်သေဆုံးသွား - MM Gallery Online
၁၁နှစ်သမီးငယ်လေးကို သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးရင်းလျှော့ခ်ဖြစ်ကာနေရာမှာပင်သေဆုံးသွား
စိတ်မကောင်းစရာပါ ထိုင်းမှာဖြစ်သွားတာပါ ထိုင်းနိုင်ငံ အယုဒ္ဒယခရိုင် မဟာရတ်မြို့ကအသက် (၁၁ ) နှစ်အရွယ်သမီးငယ်လေးကို ကျောင်းမှာ ဆရာဝန်တွေက ( Cervical Cancer Vaccine ) သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ပြီး သိပ်မကြားဘူး ကလေးက ” ရင်ဘတ်အောင့်တယ် အောင့်တယ် ” ဆိုပြီး အန်တယ် ၊ သိပ်မကြာပါဘူး ကလေးက သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။ ပုံမှန်ဘာရောဂါအခံမှလည်းမရှိဘူးလို့မိဘတွေကရေးသားထားပါတယ် ။ ဘာ့ကြောင့်သေဆုံးတာလဲလို့မည်သူမှမှတ်ချက်မပေးထားပါဘူး ။
စာသင်ကျောင်းတွေမှာကာကွယ်ဆေးတွေယခုလို လိုက်ပြီးထိုးကြတဲ့အခါ ကလေးမှာ Fever ရှိနေလား ? မရှိဘူးလား ? ဆိုတာ ကနဦး Temperature မစမ်းသပ်မိတာလား တော့မသိပါဘူး ၊ ကလေးဟာအဖျားအနည်းငယ်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်. ၊ မကြာခင်သူ့မွေးနေ့ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်..
ဒါ့ကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် , ရပ်ကွက်ထဲမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးသူငယ်တွေအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးကြရမယ်ဆိုရင် ဆေးရဲ့ အာနိသင်နဲ့ Side – effect ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု တွေကိုအရင်လေ့လာပါတယ် ၊ ကိုယ့်သားသမီးကခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်လား ? ဖျားနေသလားပေါ့… စိတ်ချမှထိုးခိုင်းပါတယ် ၊ တစ်ချို့ကာကွယ်ဆေးတွေကအရမ်းပြင်းထန်တယ်လို့သိထားလို့ပါ ၊ ကိုယ်တွေက ဆရာဝန်မဟုတ်တော့ Vaccine တွေအကြောင်းနားမှမလည်တာ ၊ ဒီတော့နီးစပ်ရာခင်မင်ရတဲ့ဆရာဝန်တွေကို မေးရမြန်းရပါတယ် ၊ သေချာမှထိုးခိုင်းပါတယ်
အခုတော့ ဆရာ/မတွေကလည်း တာဝန်ပေါ့လျာ့ကြသလို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကလည်း သေချာမစစ်မိကြတော့ စေတနာကနေ သုံးဘက်စလုံးယူကျုံးမရ ဝေဒနာဖြစ်ခဲ့ရပြီး မိဘဖြစ်သူတွေက သင်္ခန်းစာအဖြစ် နောက်နောင်ဒီလိုမဖြစ်စေဘို့ တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြပေးကြဘို့ ရေးသားထားတာလေးကိုတွေ့မိလို့ မိဘတွေရော ဆရာ/မတွေပါသတိပြုစရာအဖြစ်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရခြင်းပါ
From Sithu Maung’s FB
၁၁ႏွစ္သမီးငယ္ေလးကို သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးရင္းေလွ်ာ့ခ္ျဖစ္ကာေနရာမွာပင္ေသဆုံးသြား
စိတ္မေကာင္းစရာပါ ထိုင္းမွာျဖစ္သြားတာပါ ထိုင္းနိုင္ငံ အယုဒၵယခရိုင္ မဟာရတ္ၿမိဳ႕ကအသက္ (၁၁ ) ႏွစ္အ႐ြယ္သမီးငယ္ေလးကို ေက်ာင္းမွာ ဆရာဝန္ေတြက ( Cervical Cancer Vaccine ) သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကာကြယ္ေဆးထိုးလိုက္ၿပီး သိပ္မၾကားဘူး ကေလးက ” ရင္ဘတ္ေအာင့္တယ္ ေအာင့္တယ္ ” ဆိုၿပီး အန္တယ္ ၊ သိပ္မၾကာပါဘူး ကေလးက ေသဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္ ။ ပုံမွန္ဘာေရာဂါအခံမွလည္းမရွိဘူးလို႔မိဘေတြကေရးသားထားပါတယ္ ။ ဘာ့ေၾကာင့္ေသဆုံးတာလဲလို႔မည္သူမွမွတ္ခ်က္မေပးထားပါဘူး ။
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာကာကြယ္ေဆးေတြယခုလို လိုက္ၿပီးထိုးၾကတဲ့အခါ ကေလးမွာ Fever ရွိေနလား ? မရွိဘူးလား ? ဆိုတာ ကနဦး Temperature မစမ္းသပ္မိတာလား ေတာ့မသိပါဘူး ၊ ကေလးဟာအဖ်ားအနည္းငယ္ရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္. ၊ မၾကာခင္သူ႕ေမြးေန႕ေရာက္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္..
ဒါ့ေၾကာင့္စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ , ရပ္ကြက္ထဲမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးၾကရမယ္ဆိုရင္ ေဆးရဲ႕ အာနိသင္နဲ႕ Side – effect ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေတြကိုအရင္ေလ့လာပါတယ္ ၊ ကိုယ့္သားသမီးကခံနိုင္ရည္ရွိနိုင္လား ? ဖ်ားေနသလားေပါ့… စိတ္ခ်မွထိုးခိုင္းပါတယ္ ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကာကြယ္ေဆးေတြကအရမ္းျပင္းထန္တယ္လို႔သိထားလို႔ပါ ၊ ကိုယ္ေတြက ဆရာဝန္မဟုတ္ေတာ့ Vaccine ေတြအေၾကာင္းနားမွမလည္တာ ၊ ဒီေတာ့နီးစပ္ရာခင္မင္ရတဲ့ဆရာဝန္ေတြကို ေမးရျမန္းရပါတယ္ ၊ ေသခ်ာမွထိုးခိုင္းပါတယ္
အခုေတာ့ ဆရာ/မေတြကလည္း တာဝန္ေပါ့လ်ာ့ၾကသလို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းေတြကလည္း ေသခ်ာမစစ္မိၾကေတာ့ ေစတနာကေန သုံးဘက္စလုံးယူက်ဳံးမရ ေဝဒနာျဖစ္ခဲ့ရၿပီး မိဘျဖစ္သူေတြက သခၤန္းစာအျဖစ္ ေနာက္ေနာင္ဒီလ္ိုမျဖစ္ေစဘို႔ တာဝန္ရွိသူေတြအေနနဲ႔အထူးသတိျပဳၾကေပးၾကဘို႔ ေရးသားထားတာေလးကိုေတြ႕မိလို႔ မိဘေတြေရာ ဆရာ/မေတြပါသတိျပဳစရာအျဖစ္ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ရျခင္းပါ
ရေမြုပ်ခဲ့တဲ့ တစ်ရွာလုံးနီးပါးရဲ့ အိမ်တွေကို အသစ်ပြန်ဆောက်ပေးမယ့် Salaman Khan
လမ်းခွဲကြေးအဖိုးအခအနေနဲ့ ဒေါ်လာ 3သိန်းပေးတဲ့ရည်းစားဟောင်းကို ငွေနည်းလို့လက်မခံဘဲငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး
၀န်ထမ်းတွေမသိခင်မှာ ကျားရဲ့မဖွယ်မရာကိုကိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး
ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ညစာမပေးစားတဲ့အပြင် ဒဏ်ကြေးငွေပါ ဆောင်ခိုင်းတဲ့ Fashionဆိုင်ကြီး
ရခိုင်ပြည်နယ် COVID-19 ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် EFD GROUP မှ သိန်း ၁၀၀၀ လှူဒါန်း
မိခင်အပေါ်ဆက်ဆံပုံကိုကြည့်ပြီး မင်္ဂလာဦးည၌ပင် ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း